Taageerada xisbiga Centerka oo kor u kacday - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Hogaamiyaha xisbiga Centerpartiet Annie Lööf. sawir: Jessica Gow/TT
Taageerada xisbiga Centerka oo kor u kacday
Wareeysiyo laga qaaday 4005 qof
La daabacay torsdag 22 december 2016 kl 12.23
Taageerada xisbiga Centerpartiet ayaa kor u kacday. Boqolkii ba 9.3 dadka laga wareeystay baadhitaankan ayaa xisbigan u codeeyn lahaa hadii ay doorasho ahaan laheeyd maanta.Waa sida uu sheegay tirokoob ay shirkada Novus u sameeysay TV4.
Khaasatan dhalinyarada ay da´doodu u dhaxeeyso 18-29 jir. Sido kale dadka ku dhow da´da beeshinka 50-64 jirka ayaa iyaguna taageersan xisbigan.
Dhanka kale ayey taageerada loo qaabo xisbiga Socialdemokraterna kor u kacday.
Xisbiyada ay taageeradoodu hoos u degtay ayaa ah Moderaterna oo sida ay hadda tahay taageero ka haysta boqolkii ba 21,8 codbixiyaasha keliya. Tan ayaa ah taageeradii ugu hooseeysay ee xisbigan ilaa 2015:kii.
Sido kale xisbiga Kristdemokraterna oo iyaguna ka mid ah mucaaradka loo yaqaano Alliansen.Xisbigan ayaa ka bixii lahaa barlamaanka Iswiidhan hadii ay doorasho ahaan laheeyd maanta. Boqolkii ba 3 dadka lugu wareeystay baadhitaankan ayaa u codeeyn lahaa.
Waa in xisbi kasta haysto taageero ah boqolkii ba 4 codbixiyaasha si ay u soo galaan barlamaanka Iswiidhan.
Baadhitaankan ayaa lugu wareeystay 4.005 qof intii u dhaxeeysay 21 bishii nofeembar sannadkan ilaa 18:kii diisembar.